आज माघे संक्रान्ती । सबैले तिलको लड्डु, मुरैको लड्डु, चाकु तरुल लगायतका परिकारहरु बनाएर खाएका फोटाहरुले फेसबुकका भित्ताहरु रंगिएका थिए । सानोमा चाडपर्वहरु निकै उत्सबका साथ मनाए पनि अहिले व्यस्तताले गर्दा त्यति ध्यान पुग्दैन ।
संक्रान्ती भएकोले गर्दा आज ढिलो गरी अफिस आए । अफिस आएर कम्प्युटर खोलेर बसेको थिएँ । फेसबुक म्यासेन्जरमा मिना ढकालको फोन आयो । मोबाईल अफ गरेर चार्जमा राखेकोले गर्दा उठाउन पाईन । पहिले पनि उनको बारेमा धेरै समाचारहरु लेखिसकेको थिएँ । फेसबुकमा नै चिनजान भएर दिदी बहिनीको जस्तो आत्मियता बनिसकेको थियो । उनले ‘बहिनी एउटा सानो काम छ,भेटौं न भनेर प्रस्ताब गरिन् ।’ सुरुमा अलमल्लमा परें, भर्खरै अफिस आएर केही काम गर्न पाएको छैन कसरी समय व्यवस्थापन गरेर भेट्न जाउँ ?
अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको लागि मिना ढकाल कुनै नौलो नाम हैन । उनले लेखेका स्टाटसदेखि टिकटकसम्म भाइरल भएका हुन्छन् । केही अनलाईन मिडियाहरुले त उनले लेखेको स्टाटसलाई तोडमोड गरेर मनोज गजुरेलसँग जोडेर भ्युअर्स कमाइरहेका छन् ।
हो, उनै मिना ढकालसँग भेट्न म तीनकुनेको सिद्धार्थ कटेजमा जाँदै थिएँ । उनै मिना ढकाल जो हास्यकलाकार मनोज गजुरेलसँगको सम्बन्ध बिच्छेद पछाडी चर्चामा आएकी थिइन् ।
मैले पनि एक वर्षदेखि फेसबुकमा उनलाई पछ्याइरहेको छु । उनले लेखेका कुराहरुमा कहिले समर्थन जनाउँने त कहिले मन परेन भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेको छु ।
अनामनगरको अफिसबाट तिनकुनेको सिद्धार्थ कटेज पुग्दा उनी मलाई कुरेर बसेको थिइन् । के छ दिदी सन्चै हुनुहुन्छ ? भनेर औपचारिकता पुरा गर्दै म भित्र पसे । हाम्रो समाजमा एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग छ । मिना दिदीको फेसबुकमा कहिले कहिले हेर्छु, उनले लेखेका स्टाटसहरुमा अराजक कमेन्टहरु आइरहेका हुन्छन् । राम्रा कुराहरुलाई पनि बङ्गाएर समाचारहरु बनिरहेका हुन्छन् ।
‘डिभोर्सी महिला’ भन्ने बित्तिकै, बुढासँग बस्न नसकेकी, बुढाछाडेकी लगायतका नानाभाती ट्याग झुन्डाइन्छन् । आखिर म पनि यही समाजको पात्र न हो, उनीसँग भेट गर्दा मानिसहरुले मलाई के सोच्लान्, के समाजले एकजना डिभोर्सी महिलासँगको भेट स्वीकार्ला त ? फेरी मनोज गजुरेल र मिना ढकालको आफ्नै साथि सर्कल भएकोले गर्दा कतै यो समाज र पत्रकारिता क्षेत्रमा उनलाई समर्थन गरे भनेर बिरोध त हुने हैन ? यस्तै यस्तै कुराहरु मनमा खलिरहेँ ।
उनलाई समर्थन गर्ने र बिरोध गर्ने छुट्टाछुट्टै सर्कल छ । केहीले उनलाई समर्थन गरेका छन् भने केहिले बिरोध पनि गरेका छन् । केहि समय अगाडी मिना ढकालको बारेमा एउटा समाचार लेखेको थिएँ । लगत्तै एकजना नजिकको आफन्तले मनोज गजुरेललाई धेरै पीडा दिने मिना ढकालसँगको संगत राम्रो लागेन भनेर म्यासेज गर्नु भएको थियो । म एक पत्रकार भएको नाताले कहिले मनोज त कहिले मिनासँग संगत गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
तिनकुनेमा मैले मिना ढकालसँग २ घण्टा बिताएँ । अचम्मको कुरा के भयो भने, उनले मनोज गजुरेलको एउटा पनि नराम्रो कुरा गरिन्न । त्यसो भए किन बोलाइन् त ? भन्ने कुरा मानसपटलमा आयो होला है ? चियाको चुस्कीसँगै हामीले कुराकानी सुरु गर्यौं । बोलीमा शुद्धता, बोल्ड रुपमा प्रस्तुत हुने उनी बेला बेला कमजोर हुँदै आखाँमा आशुँ टिलपिल पार्थिन् ।
फेसबुकमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनका धेरै कुराहरुले मेरो मन छुन्थ्यो । ‘डिभोर्स गर्दैमा महिला बिचरा हुन्छन् र ? मलाई बिचरा हुनु छैन, मलाई कसैको सहानुभुतिको आवश्यक छैन । म जस्तै डिभोर्स गरेर बसेका असाह्य महिलाहरुको सहारा बन्न चाहन्छु, उनीहरुलाई बिचरा बन्नबाट बचाउन चाहन्छु ।’ उनले भनिन् । म एकोहोरो भएर उनका कुराहरु सुनिरहें । एक्लै टोलाइरहें ।
सम्बन्ध बिच्छेद हुनुका बिभिन्न कारणहरु हुन्छन् । ती मध्ये एक प्रमुख कारण भनेको घरेलु हिंसा पनि हो। हाम्रो जस्तो पुरुषप्रधान देशमा महिलाहरु कुनै न कुनै किसिमको शारिरीक, मानसिक, यौनिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक हिंसा भोग्दै आएको कुरा बिभिन्न तथ्याङ्कहरुबाट पनि थाहा पाउने गरेका छौं । परिवार, छिमेक तथा समाजको डरले धेरै महिलाहरुले आफूले पाएको हिंसाको अनुभव लुकाएर राखेका हुन्छन्। हो, तिनै महिलाहरुलाई दबिएर बस्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिन चाहन्छिन् मिना ।
सम्बन्ध बिच्छेद हुनुका धेरै कारणहरु छन् । हाम्रो समाजमा महिला सँगसँगै पुरुषहरु पनि पीडित छन् । तर, सम्बन्ध बिच्छेदपछि उनीहरु समाजमा खुलेर हिंड्न सक्छन् तर महिलाहरुलाई त्यसो गर्न अलि छुट नभएको हो कि झैं महसुस हुन्छ । मनोज गजुरेल नेपालका चर्चित हास्य कलाकार हुन् । उनलाई माया र समर्थन गर्ने लाखौं दर्शक छन् । उनै सँगको सम्बन्धका कारणले आफू चर्चामा आएको मिना स्विकार्छिन् । उनी भन्छिन् , ‘गजुरेल जीसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएपछि धेरै मिडियाहरुले मलाई पछ्याए, जस्को फलस्वरुप मलाई धेरैले चिने । म अब अन्यायमा परेका महिलाहरुको सहारा बन्न चाहन्छु ।’
डिभोर्स भएर मानसिक समस्या भोगिरहेका, अन्यायमा परेका, आफ्नो आवाज उठाउन नसक्ने, घरभित्र अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्य रहेछ । त्यसैका लागी उनले बिशालाक्षी मानव संरक्षण कुटीको स्थापना गरेकी छिन् ।
ढकालले अहिलेको पत्रकारिता कतातर्फ जाँदैछ भनेर मलाई प्रश्न तेर्साइन् । म अवाँक भए किनभने केहि समय पहिले म आफैले पत्रकारिताको भविष्य कता जाँदैछ ? भनेर लेख नै लेखेको थिएँ । पत्रकारिता तथा पत्रकारका संगठनहरुको बारेमा उनलाई धेरै ज्ञान रहेछ । फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्न पनि नजान्नेहरु पत्रकारको नेता भएर हिंडेको कुरा उनको मुखबाट सुनिरहँदा मलाई ग्लानी महसुस भइरहेको थियो । आफ्नो पेसाप्रति यस्ता कुराहरु सुन्दा मन कता कता दुख्ने रहेछ !
अत : ढकालसँगको भेटपछि मैले उनलाई राम्रो सँग चिन्ने मौका पाए । उनको व्यक्तिगत, वैवाहिक जीवन र सम्बन्ध बिच्छेद भन्दा बाहिर रहेर कुरा भयो । आम मानिसहरु ढकालका बारेमा सोच्थे, उनले डिभोर्स गरेर टन्न पैसा लिएर मोज मस्तिको जिन्दगी बिताइरहेकी छिन् । तर आम मानिसहरुले सोचेभन्दा उनले फरक जीवन बिताइएको पाएँ । लकडाउनको बेलामा घरबेटीले दिएको पीडा, सन्तानप्रतिको माया मोह र उनको भविष्यको योजनाहरु मैले सुनें ।
उनले मिडियासँग धेरै असन्तुष्टी जनाइन् । आफुले डिभोर्स एनिभर्सरी मनाएको कुरा मिडियाहरुले अनावश्यक रुपमा प्रचार गरे पनि आफ्नो छोराको जन्मदिनमा वृद्ध आश्रममा गएर राहत बाँडेको कुरा कसैले नलेखेकोमा चित्त दुखाईन् ।
कुराकानी गर्दागर्दै २ घन्टा वितेको पत्तै पाइएन् । नसोधौं भन्दाभन्दै पनि एउटा प्रश्न सोधे , दिदी एक्लो जीवन विताउन धेरै गाह्रो हुन्छ, जीवनसाथी खोज्ने हैन ? उनले मुस्कुराउँदै भनिन् , ‘अहिले विवाह भन्दा पनि समाजसेवाको बाटोमा अग्रसर हुने चाहना छ । फेसबुकमा स्टाटस लेखेकै आधारमा मिना ढकाल गलत लाग्नेहरुले पनि भोलीको दिनमा मलाई खुलेर समर्थन गरुन् भन्ने वातावरण बनाउनु छ ।’ मान्छेहरुले मलाई बियर खाएर रातभर डिस्कोमा डान्स गर्ने सम्झन्छन् । तर, मैले आजसम्म वाइन मुखमा हालेको छैन । म शाकाहारी हो ।
अनुराधा कोईराला, पुस्षा बस्नेतहरुले धेरै मिहेनत गरेर बिश्वसामु चिनिएको उदाहरण सुनाउँदै आफु पनि त्यहि बाटोमा लाग्ने र एकदिन सफल हुने आत्मविश्वास रहेको कुरा बताइन् ।
उनले आफ्नै स्कुटरमा अनामनगरको पुर्वी गेट अगाडी रहेको केटिएम दैनिकको अफिसनेर छोडिदिइन् । स्कुटरमा हुँईकिनु अगाडी “छिटैं भेटौं है बहिनी” भन्दै आफ्नो बाटो लागिन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रबार, माघ २, २०७७ १३:२४:२२
देउवालाई ‘दोहोरो अफर’, दुईतिरबाट प्रधानमन्त्री बन्न ‘कर’